အာဆင်နယ်-လီဗာပူးလ်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်များ
3 Nov 2018 . 5:01 PM
ဒီတစ်ပတ် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် (၁၁)မှာ ရလဒ်ကောင်းတွေ ရယူနေတဲ့ အာဆင်နယ်နဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီအစ (၂)ပွဲဆက် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးကတည်းက ရှုံးပွဲမရှိတော့တဲ့ အာဆင်နယ်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ လုံးဝ ရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့ လီဗာပူးလ်တို့ပွဲက ဘယ်လိုရလဒ်ထွက်လာမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်တွေ၊ ဒဏ်ရာရ ကစားသမားတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖြော်ပလိုက်ပါတယ် . . .
အိမ်ရှင် အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ခံစစ်မှာ ဒဏ်ရာရသူတွေ များပြားနေတယ်။ ဘယ်လာရင် Hector Bellerin ဟာ ပေါင်ဒဏ်ရာရရှိနေပြီး မွန်ရီယဲလ် Nacho Monreal နဲ့ ကိုလာရှီနက် Sead Kolasinac တို့ကတော့ တံကောက်ကြောဒဏ်ရာကနေ အခုမှ ပြန်သက်သာလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုကရေးတစ် Sokratis Papastathopoulos မှာလည်း ခြေချင်းဝတ် ဒဏ်ရာရှိနေတယ်။ ခြေဖနောင့်ကျော ဒဏ်ရာကြောင့် ကာလရှည်အနားယူနေရတဲ့ ကိုစီယဲလ်နီ Laurent Koscielny ဒီပွဲကို လွဲချော်မှာဖြစ်ပြီး ကွင်းလယ်လူတွေဖြစ်တဲ့ ဂွမ်ဒူဇီ Matteo Guendouzi (ပွဲပယ်)၊ အယ်လ်နန်နီ Mohamed Elneny (ပေါင်)တို့လည်း ပါဝင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လီဗာပူးလ်အသင်းမှာတော့ ဒဏ်ရာကြီးကြီးမားမား ရတဲ့သူ မရှိဘဲ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က မပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဘယ်နောက်ခံလူ ရော်ဘတ်ဆန် Andrew Robertson ဒီပွဲမှာ ပါဝင်လာမှာပါ။
– အာဆင်နယ်ဟာ လီဗာပူးလ်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် နောက်ဆုံး(၆)ပွဲမှာ (၃)ပွဲသရေ၊ (၃)ပွဲရှုံးခဲ့ပြီး ဒါဟာ ၁၉၉၄ ကနေ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တုန်းက (၁၂)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲမရခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း အဆိုးရွားဆုံး မှတ်တမ်းပါပဲ။
– လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ အာဆင်နယ်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အဝေးကွင်း (၁၈)ပွဲမှာ (၂)ပွဲသာ အနိုင်ရခဲ့ပြီး (၈)ပွဲသရေ၊ (၈)ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။
– အာဆင်နယ်နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်နောက်ဆုံး (၅)ပွဲမှာ လီဗာပူးလ်အသင်း တစ်ပွဲကို အနည်းဆုံး (၃)ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး နှစ်သင်းပေါင်းသွင်းဂိုးက (၂၇)ဂိုးအထိ ရှိခဲ့လို့ တစ်ပွဲပျမ်းမျှ (၅.၄)ဂိုးအထိ ရှိခဲ့တယ်။
– အာဆင်နယ်နဲ့ နောက်ဆုံးဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် (၃)ပွဲဆက်မှာ ဖေမီနို Roberto Firmino ဟာ ဂိုးသွင်းခဲ့သလို ဂိုးဖန်တီးမှုလည်း ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဆာလာ Mohamed Salah ကလည်း အာဆင်နယ်နဲ့ ဆုံတွေ့တဲ့ (၃)ပွဲစလုံး ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီး (ချယ်လ်ဆီး-၁ ဂိုး၊ လီဗာပူးလ် -၂ဂိုး) အာဆင်နယ်ဘက်ကို (၄)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့တာက ချာလီအော်စတင် Charlie Austin တစ်ဦးတည်းရှိပါတယ်။
– လီဗာပူးလ်အသင်းနည်းပြ ယာဂန်ကလော့ပ် Jurgen Klopp ဟာ အာဆင်နယ်နဲ့ ဆုံတွေ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် (၅)ပွဲ စလုံး ရှုံးပွဲမရှိသေးပါဘူး။ သူ့မတိုင်ခင် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အာဆင်နယ်ကို ပွဲအများဆုံး ရှုံးပွဲမရှိတာက ဖာဂူဆန် Alex Ferguson (၆ပွဲ)၊ ဂယ်ရီဖရန့်စစ် Gerry Francis (၈ပွဲ)၊ မော်ရင်ဟို Jose Mourinho (၁၂ပွဲ)တို့သာ ရှိပါတယ်။
– အူနိုင်းအမ်မရီ Unai Emery နဲ့ ယာဂန်ကလော့ပ် Jurgen Klopp တို့ဟာ ၂၀၁၆ ယူရိုပါလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲမှာ ပထမဆုံး ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး အူနိုင်းအမ်မရီရဲ့ ဆီဗီလာအသင်းက (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တယ်။
အာဆငျနယျ-လီဗာပူးလျပှဲနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားခကျြမြား
ဒီတဈပတျ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲစဉျ (၁၁)မှာ ရလဒျကောငျးတှေ ရယူနတေဲ့ အာဆငျနယျနဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးတို့ ထိပျတိုကျတှကွေ့မှာဖွဈပါတယျ။ ရာသီအစ (၂)ပှဲဆကျ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီးကတညျးက ရှုံးပှဲမရှိတော့တဲ့ အာဆငျနယျနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ လုံးဝ ရှုံးပှဲမရှိသေးတဲ့ လီဗာပူးလျတို့ပှဲက ဘယျလိုရလဒျထှကျလာမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဒီပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားခကျြတှေ၊ ဒဏျရာရ ကစားသမားတှနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖွေျာပလိုကျပါတယျ . . .
အိမျရှငျ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ခံစဈမှာ ဒဏျရာရသူတှေ မြားပွားနတေယျ။ ဘယျလာရငျ Hector Bellerin ဟာ ပေါငျဒဏျရာရရှိနပွေီး မှနျရီယဲလျ Nacho Monreal နဲ့ ကိုလာရှီနကျ Sead Kolasinac တို့ကတော့ တံကောကျကွောဒဏျရာကနေ အခုမှ ပွနျသကျသာလာတာဖွဈပါတယျ။ ဆိုကရေးတဈ Sokratis Papastathopoulos မှာလညျး ခွခေငျြးဝတျ ဒဏျရာရှိနတေယျ။ ခွဖေနောငျ့ကြော ဒဏျရာကွောငျ့ ကာလရှညျအနားယူနရေတဲ့ ကိုစီယဲလျနီ Laurent Koscielny ဒီပှဲကို လှဲခြျောမှာဖွဈပွီး ကှငျးလယျလူတှဖွေဈတဲ့ ဂှမျဒူဇီ Matteo Guendouzi (ပှဲပယျ)၊ အယျလျနနျနီ Mohamed Elneny (ပေါငျ)တို့လညျး ပါဝငျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ လီဗာပူးလျအသငျးမှာတော့ ဒဏျရာကွီးကွီးမားမား ရတဲ့သူ မရှိဘဲ ပွီးခဲ့တဲ့တဈပတျက မပါဝငျခဲ့တဲ့ ဘယျနောကျခံလူ ရျောဘတျဆနျ Andrew Robertson ဒီပှဲမှာ ပါဝငျလာမှာပါ။
– အာဆငျနယျဟာ လီဗာပူးလျနဲ့ ဆုံတှခေဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ နောကျဆုံး(၆)ပှဲမှာ (၃)ပှဲသရေ၊ (၃)ပှဲရှုံးခဲ့ပွီး ဒါဟာ ၁၉၉၄ ကနေ ၂၀၀၀ ခုနှဈတုနျးက (၁၂)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲမရခဲ့တဲ့နောကျပိုငျး အဆိုးရှားဆုံး မှတျတမျးပါပဲ။
– လီဗာပူးလျအသငျးဟာ အာဆငျနယျနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ အဝေးကှငျး (၁၈)ပှဲမှာ (၂)ပှဲသာ အနိုငျရခဲ့ပွီး (၈)ပှဲသရေ၊ (၈)ပှဲရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။
– အာဆငျနယျနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျနောကျဆုံး (၅)ပှဲမှာ လီဗာပူးလျအသငျး တဈပှဲကို အနညျးဆုံး (၃)ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး နှဈသငျးပေါငျးသှငျးဂိုးက (၂၇)ဂိုးအထိ ရှိခဲ့လို့ တဈပှဲပမျြးမြှ (၅.၄)ဂိုးအထိ ရှိခဲ့တယျ။
– အာဆငျနယျနဲ့ နောကျဆုံးဆုံတှခေဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ (၃)ပှဲဆကျမှာ ဖမေီနို Roberto Firmino ဟာ ဂိုးသှငျးခဲ့သလို ဂိုးဖနျတီးမှုလညျး ပွုလုပျနိုငျခဲ့တယျ။ ဆာလာ Mohamed Salah ကလညျး အာဆငျနယျနဲ့ ဆုံတှတေဲ့ (၃)ပှဲစလုံး ဂိုးသှငျးခဲ့ပွီး (ခယျြလျဆီး-၁ ဂိုး၊ လီဗာပူးလျ -၂ဂိုး) အာဆငျနယျဘကျကို (၄)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့တာက ခြာလီအျောစတငျ Charlie Austin တဈဦးတညျးရှိပါတယျ။
– လီဗာပူးလျအသငျးနညျးပွ ယာဂနျကလော့ပျ Jurgen Klopp ဟာ အာဆငျနယျနဲ့ ဆုံတှတေဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ (၅)ပှဲ စလုံး ရှုံးပှဲမရှိသေးပါဘူး။ သူ့မတိုငျခငျ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ အာဆငျနယျကို ပှဲအမြားဆုံး ရှုံးပှဲမရှိတာက ဖာဂူဆနျ Alex Ferguson (၆ပှဲ)၊ ဂယျရီဖရနျ့စဈ Gerry Francis (၈ပှဲ)၊ မျောရငျဟို Jose Mourinho (၁၂ပှဲ)တို့သာ ရှိပါတယျ။
– အူနိုငျးအမျမရီ Unai Emery နဲ့ ယာဂနျကလော့ပျ Jurgen Klopp တို့ဟာ ၂၀၁၆ ယူရိုပါလိဂျ ဗိုလျလုပှဲမှာ ပထမဆုံး ဆုံတှခေဲ့ပွီး အူနိုငျးအမျမရီရဲ့ ဆီဗီလာအသငျးက (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တယျ။